Labo carruur ah oo gaajo iyo oon ugu dhintay baadiyaha gobolka Karkaar. – Radio Daljir
Labo carruur ah oo gaajo iyo oon ugu dhintay baadiyaha gobolka Karkaar.
Qardho, April 20 – Labo carruur ah ayaa gaajo iyo harraad ugu dhintay baadiyaha gobolka Karkaar, ka dib markii baartu cayraysay qoyskoodii oo xoolo dhaqato ahaa daganaana dhulka miyiga ah ee abaartu sida daran u saamaysay.
Cisbitaalka Magaalada Qardho ayaa la soo gaarsiiyay qoysas kale oo u badan caruur iyo haween kuwaas oo ay nafaqo dari iyo gaajo soo riteen haatana xaaladooda lagula tacaalayo cisbitalka magaalada qardho.
Wariyaha daljir ee Qardho Mudiyadiin Hirad Kaatun oo booqday isbitaalka ayaa sheegay in ay indhihiisu qabanayeen Caruur fara badan oo ay ka muuqato nafaqo yari iyo dhiig la’aan, qaarkood ayaana laga dayrinayaa xaaladsooda, inkasta oo dhakhaatiirtu ay ku dadaalayaan sidii loo badbaadin lahaa.
Gobolka Karkaar oo kaliya maahan goobaha ay dadka ugu geeriyoonayaan abaaraha waxaase jira degaano kale oo isla Puntland ka tirsan oo sidan oo kale ay abaaraha dad ugu geriyoodeen inkastoo ilaa hadda aanay muuqan wax qabad dhab ah oo loo sameeyey dadka abaartu ku habsatay.
Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo meelaha qaar ay ka curteen roobabkii Gu?ga balse uu jiro wal-wal ku aaddan in roobabka aysan si buuxda u di?in.